असार १५ अर्थात राष्ट्रिय धान दिवस - DibyaJyotish (दिव्य ज्योतिष)
मानो रोपेर मुरी फलाउने समय। देशभर रोपाई गरी दही चिउरा खाएर पर्वकै रुपमा मनाइदै छ पन्ध्र असार। आजको दिनलाई राष्ट्रिय धान दिवसको रुपमा पनि मनाईन्छ।
आज असार १५ अर्थात राष्ट्रिय धान दिवस। मानो रोपेर मुरी फलाउने समय। देशभर रोपाई गरी दही चिउरा खाएर पर्वकै रुपमा मनाइदै छ पन्ध्र असार। आजको दिनलाई राष्ट्रिय धान दिवसको रुपमा पनि मनाईन्छ। मानो रोपेर मुरी फलाउने समयको रुपमा लिइने असार महिनामा निकै चटारो हुन्छ नेपाली किसानहरुलाई। त्यसमा पनि मध्य असार अर्थात् असार १५ को महत्व त झनै वढी छ। असार पन्ध्रको दिन रोपिएको धान अघिपछि रोपिएको भन्दा वढी फल्ने विश्वास छ। आजको दिन धान रोपाई गरी दही चिउरा खानाले शुभलाभ हुने धार्मीक र सांस्कृतिक विश्वास समेत छ । आफ्नो जमीन नहुने र खेतीपाती नहुनेहरुले पनि आजको दिन रोपाईमा सहभागी भएर हिलो छ्यापाछ्याप गरी रमाइलो गर्ने गर्दछन्। असारे गीतको भाकाले त असार पन्ध्रको रौनक झनै वढाइदिन्छ। रोपाई गर्दा किसानका दुख पिर तथा हर्ष र उल्लासलाई समेटी असारे गीतका रुपमा गाउने गरिन्छ। समुह समुहमा मिलेर असारे भाकामा दोहोरी गाउने प्रचलन समेत छ।
धेरै खेत हुने किसानहरुले बेठी लगाउने अर्थात पञ्चेवाजा बजाई नाचगान गर्ने, भोज खुवाउने तथा खेतालाहरुलाई मसला र रुमाल बाँडेर रमाइलोसंग रोपाईं गर्ने परम्परा पनि छ। पालैपालो एक अर्काको मेलामा सहभागी भएर रमाइलो संग रोपाईं गर्दा यसले सामाजिक सद्भाव र एकतामा समेत सहयोग पुर्‍याउँदै आएको छ। बर्षा हुने असारको महिना बर्षभरीको लागि चाहिने खाद्यान्न धानवाली लगाउन कडा परिश्रम गर्नुपर्ने समय हो। यस्तो समयमा रोग नलागोस् र शरीर स्वस्थ रहोस भनेर दहि चिउरा खाने गरिएको र दहि खाएमा शरीमा राम्रोसंग रक्तसञ्चार भइ शक्ति परिश्रम गर्न सजिलो हुने जनविश्वास छ। तर आकासे खेतीमा भर पर्नु पर्दा भने असारको चटारोसंगै पीडा पनि थप्ने गरेको छ नेपाली किसानलाई। यसबर्ष आधा असार वितिसक्दा पनि पर्याप्त बर्षा नहुनाले धेरैजसो ठाँउमा रोपाई हुन सकेको छैन। यससंगै रोपाईंको समयमा हुने मल अभाव पनि किसानका लागि अर्को पीडा वन्ने गरेको छ। राष्ट्रको कुल गार्हास्थ उत्पादनमा चालिस प्रतिशतसम्म योगदान कृषि क्षेत्रले ओगट्दै आएपनि यस क्षेत्रको विकासको लागि प्रभावकारी योजना र चासोको अभाव खड्किंदै आएको छ।
दोहोरी रोपाईं गीतको रन्कोमा रोपाईं गर्नु असारको अर्को आकर्षण हो। असारको पहिलो सातादेखि मनसुन सुरू भएपछि असार १५ सम्म खेत गर्‍हामा लाठे र रोपारहरू असारे गीतको भाकासँगै रोपाईंमा व्यस्त हुन्छन्। असार १५ सम्म लाठे र बाउसेहरूलाई आली जोर्ने र मेलो बनाउन चटारो छ भने कोरी वाटी चिटिक्क परेर मेलामा झरेका रोपारहरू कोही ब्याडमा बीउ काट्ने, कोही पखाल्ने र कोही मेलो पैट्याउने तर्खरमा जुटेका हुन्छन्। राष्ट्रको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ३८ देखि ४० प्रतिशतसम्म योगदान रहेको कृषि क्षेत्रमा असारको रोपाईंले ठूलो राख्छ।
कृषि प्रधान देश नेपालमा प्रमुख खाद्यान्न धान बालीको उत्पादनमा हुने घटबढले अर्थतन्त्रमा समेत त्यसैअनुसार प्रभाव पार्ने भएकाले रोपाईंको ठूलो महत्व छ। सामान्यतया नेपालमा जुन १० अर्थात् जेठको अन्तिम सातादेखि मनसुन सुरू हुन्छ। देशमा कुल धानखेतीको करिब २१ प्रतिशत क्षेत्रफलमा मात्र सिंचाई सुविधा उपलब्ध भएकाले बाँकी क्षेत्र मनसुनमै भर पर्नुपर्ने स्थिति छ। त्यसैले मानो रोपेर मुरी फलाउने यो समयमा कृषकहरू आफ्ना अन्य काम छाडेर भएपनि असारे भेल छोपी धानबाली लगाउन व्यस्त हुन्छन्। असार महिनाभित्रै रोपाईं गर्न नपाइएमा धान पाक्ने संभावना कम हुनाले पनि रोपाईंमा व्यस्त हुनुपरेको हो। साता पन्ध्र दिन काम गरेर वर्षभर खाने बाली लगाउन कामको मिचो भएकाले वास्तवमा सबै कृषकका लागि असारको पन्ध्र महत्वको हुन्छ। लासलाई एकछिन घुमले छोपेर भएपनि असारे भेल छोप्नु पर्दछ भन्ने बुढापाकाको भनाइले पनि यसको महत्व दर्शाउँछ।
त्यस्तै ‘असारमा डुल्ने पजनीमा भुल्ने’ अर्थात् असारमा काम गर्ने बेलामा त्यसै डुल्ने र सरकारको काम इमान्दारीपूर्वक नगरी पदोन्नति अर्थात् पजनीमा नपर्ने व्यक्तिले गरिखाँदैन भन्ने बुढापाकाको अर्को उखानले पनि असारको महत्वलाई पुष्टी गर्छ। रोपाईं कार्य मुलुकको सामाजिक, धार्मिक र सांस्कृतिक पक्षसँग पनि निकटरूपमा जोडिएको छ। रोपाईंको पहिलो दिन देवतालाई बीउ चढाई परिपूर्ण, भरिपूर्णका लागि अन्नपूर्णको आराधना गरी रोपाईंको श्रीगणेश गरिन्छ। रोपाईंमा धेरै खेतालाको आवश्यक पर्ने भएकाले गाउँघरमा पालैपालो पर्मद्वारा रोपाईं गरिने भएकाले यस्ले सामाजिक एकता र सद्भाव बढाउन पनि ठूलो टेवा पुर्‍याउँदै आएको छ। कतैकतै ठूला खेती भएकाले रोपाईं गर्दा बेठी लगाउने अर्थात् पञ्चेबाजा बजाई नाचगान गर्ने, भोज खुवाउने तथा खेतालाहरूलाई मसला र रूमाल बाँड्ने पनि प्रचलन छ। एक आँकडाअनुसार धानखेतीको करिब ६० प्रतिशत क्षेत्र अझै आकाशे पानीमै निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता छ। पानी धेरै नपर्ने स्थानमा एकप्रकारको घैया धान लगाउन सकिन्छ, तर वर्षे धान भन्दा यस्को उत्पादन भने कम हुन्छ।
नेपालमा ८५ प्रतिशत मनसुन जुनदेखि सेप्टेम्बरसम्ममा र १० प्रतिशत हिउँदमा हुने गरेको छ। नेपालमा समुद्री सतह भन्दा ७० मीटर उचाईमा रहेको झापाको केचनादेखि २ हजार ७८० मीटर उचाइमा रहेको जुम्लाको छुमचौरसम्म धानखेती गरिंदै आएको छ। जुम्लामा लगाइने धानखेतीलाई विश्वकै सबैभन्दा उच्च स्थानमा धानखेती भएको मानिन्छ। पहिला पहिला मार्सी, तौली, थापचिनिया, वासमती खट्टेखानी आदि जातका धानखेती गरिन्थ्यो भने हाल ताईचुङ्ग, विन्देश्वरी, खुमल, मन्सुली, राधा चार आदि विकासे जातका धान लगाइन थालेको छ। एक आँकडाअनुसार धानखेतीको ७९ प्रतिशत क्षेत्रफल विकासे जातका धानखेतीले ओगटेको बताइन्छ। धान रोपाईं गर्ने बेलामा बेर्ना नडुब्ने गरी खेतमा दुई/तीन से.मी. पानी जम्ने गरी तयार गरिए पनि बेर्ना बढ्दै गएपछि नपसाउन्जेलसम्म पाँचदेखि १० से.मी. पानी हुनु उपयुक्त हुन्छ।जे होस्, राष्ट्रिय धान दिवसको रुपमा समेत मनाइने यो दिन साँच्चिकै मानो रोपेर मुरी उब्जाउने दिन वनोस् सम्पूर्ण नेपाली किसानका लागि। –